Jabuuti oo si kulul kaga jawaabtay hadalkii ciidanka badda Itoobiya – Somali Top News
Jabuuti oo si kulul kaga jawaabtay hadalkii ciidanka badda Itoobiya
December 5, 2019 December 5, 2019 Somali Top News	0 Comments Jabuuti oo si kulul kaga jawaabtay hadalkii ciidanka badda Itoobiya
Kaddib 24 saac oo hadal-heyn ballaaran ay qabsatay warbaahinta gudaha iyo dibadda oo ku saabsan in ciidanka badda Itoobiya ayaa warkaasi waxaa si adag uga hadashay dowladda Jabuuti.
Jabuuti waxaa ay iska fogeeysay wararka sheegaya in ay marti-gelin doonto saldhig cusub oo ay furanayaan ciidamada badda ee xukuumadda Addis Ababa.
Jariiradda The Capital Ethiopia oo soo xiganaysa taliska ciidamada laga hirgalinayo ismaamulka amxaarada ee Bahar Dar ayaa shaaciyay in qorshaha saldhigga ciidanka badda Itoobiya ay Jabuuti ku marti-gelineyso ay ka wada munaashaqoodeen Ra’iisul wasaare Abiy Ahmed Ali iyo Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle.
Ciidamada badda Itoobiya ayaa la kala diray, markii Eritrea ay go’aansatay in Itoobiya ay ka go’do taasoo dalkaasi ka dhigtay waddan aan bad lahayn.
Danjiraha dowladda Jabuuti u fadhiya magaalada Addis Ababa Idiris Maxamed Faarax oo la hadlay BBC ayaa waxba kama jiraan ku sheegay warkaasi.
“Waxba kama jiraan weeye wararka ay wadaan Jariiradaha Itoobiya, kaasoo sheegaya in ciidanka badda Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan Jabuuti, waxaan caddeeynayaa in warkaasi uusan ahayn mid xaqiiqo ah” ayuu yiri safiirka.
Idiris ayaa ku adkeystay, “in warkaasi uusan rasmi ahayn” isagoo xusay in labada hoggaamiye aynaan arrintaas ka wada hadlin.
Waxaase uu qiray danjiraha Jabuuti ee Itoobiya in dalab ceynkaas ah uu ka yimid Raysal wasaare Abiy balse aan la isla meel dhigin, wixii soo siyaadana waqtigu uu sheegayo.
Itoobiya ayaa kal hore shaacisay in ay sameeysanayso ciidamo badeed, waxaase tan lala yaabo ay noqotay dal aan lahayn wax bad ah sida uu yeelayo ciidan badeed.
Bartamihii sanadkii tegay ee 2018-ka, ayaa Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed booqasho uu ku soo gaaray magaalada Muqdisho oo qaadatay 4 saac.
Shir uu aqalka madaxtooyada Soomaaliya ay ku wada yeesheen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo RW Abiy Ahmed ayaa waxaa ay isla meel-dhigeen heshiis dhowr qodob ka kooban oo midkood uu sheegayo in 4 dekaddood oo Soomaaliya ah Itoobiya lagu wareejinayo.
–Heshiiskaasi, oo dhalleeceyn xooggan kala kulmay xubno ka tirsan labada aqal ee sharci dejiyeyaasha dalka iyo siyaasiyiin ayaa muddooyinkii dambe hadal-heyntiisu yaraatay.
← Wasiirka Maaliyadda iyo safiirka Mareykanka oo ka hadlay deyn cafinta Soomaaliya
UN adopts resolution renewing authorization for Somalia anti-piracy measures →
Wafdi Ka Socda Somaliland Oo Ku Wajahan Deegaan Lagu Dagaalamay
Muwaadiniin u dhashay dalka Canada oo lagu xiray xabsi ku yaala Soomaaliya
Duqa Muqdisho oo booqday qaar kamid ah Isbitaalada Muqdisho oo la geeyay dhaawacyada
December 28, 2019 December 28, 2019 Somali Top News 0